အားလပ်ရက်အပေါ်နွေရာသီမှာတော့ကျနော်တို့ကိုသင်ကင်ပေါ်ကြော်အကြံပြု ငါး skewers ။ တစ်ပန်းကန်မျှမျှတတလျင်မြန်စွာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အရသာကိုအသား kebabs ထက်ကြောင်းပိုဆိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါး - အရှိဆုံးအနိမ့်ကယ်လိုရီနှင့်ကျန်းမာဟင်းလျာများထဲကတစ်ခုဟုယူဆ။ ဒါဟာငါးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ် marinades နှင့်ဝက်အူချောင်းအမျိုးမျိုးကနေလုံးဝကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဘယ်လောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အရသာဟာကင်ပေါ်ငါး skewers ချက်ပြုတ်ရန်သင့်အားပြောပြလိမ့်မယ်။
အဆိုပါကင် skewers အပေါ်ငါး Skewers
ပင်လယ်ငါးလွှာ -3ကီလိုဂရမ်;
ပူငရုတ်ကောင်း - 1 ခွံ;
ကြက်သွန်ဖြူ - 1 ဦးခေါင်း;
ငါးအကောင်းတစ်ဦးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်သို့။ တစ်အပိုင်းအစကြီးတွေထွက်လှည့်လျှင်, သေးတစ်ဝက်၌ခုတ်ဖြတ်။ အဆိုပါကင်များအတွက်ငါးစိမ်ရန်, ပူငရုတ်ကောင်းနှင့်ကြက်သွန်ဖြူ clean ။ ထိုအခါ melenko သတိနဲ့နေတဲ့ grater အပေါ်တစ်ဦးဓါးသို့မဟုတ်ဖျက်စီးနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်များခုတ်။ ထို့ပြင်ရလဒ်အရောအနှောဆားဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပွတ်သပ်ချပစ်။ ပြီးနောက်အားလုံးလတ်ဆတ်သောသံပုရာဖျော်ရည်နှင့်အတူဖြန်းနဲ့နာရီဝက်အဘို့ချန်ခြွင်း။ ထို့နောက်ငါး၏အပိုငျးပိုငျး marinating ကာလအတွင်းငါးကနေစီးကြောင်းအခါအားလျော်စွာရည် basting, အကင်ပေါ်မှာ skewer နဲ့ကြော်အပေါ်တင်။
ငါးတန်း -5PCs; ။
သံလွင်ဆီ - 30 ml ကို;
မြေပြင်အနီရောင်ငရုတ်ကောင်း - မြည်းစမ်းရန်,
သံပုရာ - 1 pc; ။
လတ်ဆတ်တဲ့ပင်စိမ်း - ကိုမြည်းစမ်းဖို့။
လွှာနှင့်အတူအားလုံးအဓိကသွေ့ခြောက်သောအရိုးကို select နှင့်သူ၏ရှည်လျားသောကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်။ Next ကိုချဉ်ငါးနှင့်အကြောင်းကို 3:00 ဘို့စိမ်ထားခဲ့။ သံလွင် maslitse တစ်ပန်းကန်လုံးထဲသို့ marinade လောင်း, ငရုတ်ကောင်းနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများကိုသွန်းလောင်းနှင့်လတ်ဆတ်သောသံပုရာကနေဖျော်ရည်မြည်းစမ်းညှစ်ဖို့ကုန်တယ်အစိမ်းရောင်ပင်စိမ်း, ဆားပစ်။ ငါး၏ဤအရောအနှောပွတ်သပ်နှင့်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထည့်သွင်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအခါဆန်ခါပေါ် workpiece lay နှင့် 20 မိနစ်မီးသွေးကျော်ချက်ပြုတ်။
အနီရောင်ငါးတန်းပါ - 1 ကီလိုဂရမ်;
Mayonnaise - မြည်းစမ်းခြင်းငှါ၎င်း,
ငါး kebab, လွှာလက်ကိုင်များအတွက်ကောင်းတစ်ဦး Mayonnaise နှင့်အတူနံ့သာမျိုးနှင့်အင်္ကျီကိုပွတ်သပ်။2နာရီအဘို့အချဉ်, အဲဒီနောက်ကင်ပေါ်ငါးကို တင်. , အဖြူရောင်စပျစ်ရည်နှင့်ဖြန်းခြင်းနှင့် 20 ခန့်မိနစ်ကင်ပေါ်မီးခဲကျော်ချက်ပြုတ်အဆငျသငျ့ skewers အနည်းငယ်အအေးတစ်ပန်းကန်ထဲမှာပြန့်ပွားခြင်း, ထောပတ်လောင်းနှင့်မီးဖုတ်ထားသောအာလူးနဲ့အစိမ်းရောင်နှင့်အတူဝတ်ပြုကြလော့။
ပုံမှန်အတိုင်း - တစ်ဦးအသေကောင်ကို 2;
စင်ကြယ်သော4စင်တီမီတာအထူတူအရွယ်အစားအသားကင်သို့ဖြတ်ငါး။ ထို့နောက်ဆား, စိမ်ဖို့သူတို့ကိုမြည်းစမ်းထားခဲ့ဖို့ငရုတ်ကောင်း။ ထိုနောက်မှကျနော်တို့ဂရုတစိုက်တစ်ဦး skewer အပေါ်တင်, အကင်ပေါ် skewer ပြင်ဆင်လော့။ ငါး roasting စဉ်အတွင်းသံလွင်ထောပတ်နှင့်ဖြန်းတဲ့ဒယ်အိုးထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အဖုံးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တုန်လှုပ်။ မီးဖုတ်ထားသောအာလူးနှင့်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အချော skewers အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
ငါးခူတန်း - 1.5 ကီလိုဂရမ်;
လတ်ဆတ်တဲ့ထုံး -3PCs; ။
ငါးအဘို့နံ့သာမျိုးနှင့်ရာသီအလိုက် - မြည်းစမ်းဖို့။
ထုံးရေဆေး, ပဝါနှင့် shinkuem စက်ဝိုင်းခြမ်းနှင့်အတူခြောက်သွေ့သောသုတ်။ ငါးဂရုတစိုက်အချို့ဆားထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မြည်းစမ်းဖို့နံ့သာမျိုးကိုဖြန်း, ဆေးရမည်။ , အကင်ပေါ် pangasius လွှာကိုတင်ထိပ်ကုန်တယ်ထုံးကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်စိမ်ထားခဲ့။ ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဟာမီး။ ငါးပြီးနောက်လုံးဝစိမ်နံ့သာမျိုးကိုစိမ်, အမီးခဲနှင့် set ကိုကျော်ဆန်ခါပေါ်မှာ shift ။ ကြော်, အပိုင်းပိုင်းအစဉ်မပြတ်လှည်မီးရှို့ရာသို့မဟုတ်အထဲကအခြောက်မပေးပါ။ 25 မိနစ်အကြာတွင်အချောပန်းကန်ကင်မှဖယ်ရှားရန်နှင့်ကျောက်မီးသွေးဖုတ်ထဲမှာ, အာလူးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ကျပ် pancakes - pancakes နှင့်ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများဟင်းလျာများ7အကောင်းဆုံး toppings
တစ်ကြော်ဒယ်အိုးထဲမှာ chanterelles နှင့်အတူအာလူး
ရောက်ရေချိုငါး pickle ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ချိုးငှက်လသာဆောင်ပေါ်မှာအသိုက်လုပ် - ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာ
မော်လ်တာ - ဗီဇာ
ကြောကျခဲအမြိုးသမီးမြား Taurus ကိုက်ညီဘယ်?
အသေးစားအခန်းထဲမှာ - စိတ်ကူးများပြုပြင်
အဖြူ Sneaker ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ဒီဇိုင်းနွေရာသီ 2016 လက်သည်း
ကို "မြက်" ၏ဇာထိုး
Zumba များ: Music